ဧရာ(မန္တလေး) | MoeMaKa Burmese News & Media
>Cartoon Saw Ngo - Beyond 2010, whose futures lie there ? who?
Posts Tagged ‘ ဧရာ(မန္တလေး) ’
ဧရာ(မန္တလေး) – အတော်ဆုံးကလေးတွေ ဆိုသတဲ့လား (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ PISA (Programme for International Student Assessment) လို့ခေါ်တဲ့ ၁၅-နှစ်အရွယ် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်တဲ့...
ဧရာ(မန္တလေး) – ဝါဇီမှာ ရိုက်ထုတ်စရာ မလိုတဲ့ အီးပိုက်ဆံ … (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ ၂၀၀၈-ခု ကမ္ဘာ့ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တော့ ငွေတမျိုး ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အစိုးရတွေက...